BQ Cervantes တို့ထိသည့်အလင်းသည်ပိတ်ထားသလား။ ဤပြproblemsနာများမှအဖြေ | eReaders အားလုံး
Villamandos | | BQ, စာဖတ်သူများ
မင်းမှာရှိလား BQ Cervantes Touch Light ပိတ်ထားသည်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့ပြonနာတွေကိုမှတ်ချက်ပေးဖို့ငါတို့ဆီကိုပြန်လာကြသူတွေများလို့ပဲ device BQ Cervantes တို့ထိပါ ၎င်းင်း၏စဉ်ဆက်မပြတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းပြproblemsနာများသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုပြproblemsနာများအတွက်အဖြေတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆောင်းပါးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ကြသည် ပိတ်ဆို့ခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွန်ယက်များ၏ကွန်ယက်မှတစ်ဆင့်ကောက်ယူစုဆောင်းထားသောဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူ သို့သော်ဤဆောင်းပါးသည်ဖြစ်နိုင်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုဖွင့်ထားသော်လည်း၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့သည့်အခါထည့်ပါလိမ့်မည် (ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် BQ နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအကူအညီတောင်းသော်လည်းတုန့်ပြန်မှုမရသေးပါ) ။
BQ Cervantes Touch Light ကိုပိတ်ထားရခြင်း
အ များသောအားဖြင့် BQ Cervantes Touch Light ကိုပိတ်ဆို့သောအဓိကအကြောင်းတရားများ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသူတို့နေသောခေါင်းစဉ်:
လာမည့် (သို့) ယခင်စာမျက်နှာမဟုတ်သောစာမျက်နှာသို့သွားပါ
စာမျက်နှာများကိုအလွန်လျှင်မြန်စွာ (သို့) လျှင်မြန်စွာဖွင့်ပါ
BQ Cervantes Touch Light ကိုပိတ်ထားရန်ဖြေရှင်းချက်
BQ နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုမှပထမအကြိမ်တုံ့ပြန်မှုအနေဖြင့်၎င်းတို့အား ဦး စွာပြုလုပ်သင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောခဲ့သည် device ၏ operating system ကို update လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်း။ ဤလုပ်ဆောင်မှုကိုလုပ်ဆောင်ရန်သင်သည်အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာရမည် -
ကနေ update ကိုင်သော compressed ဖိုင်ကို Download လုပ်ပါ http://www.bqreaders.com/descargas-cervantes-touch.html.
download လုပ်ထားသောဖိုင်ကို unzip လုပ်ပြီး folder ကို copy လုပ်ပါ ကျောက်တံတား အချည်းနှီး format လုပ်ထားတဲ့ microSD ကဒ်၏ root folder ထဲမှာ။ ဤဖိုင်တွဲတွင်ဖိုင်များပါဝင်သင့်သည် update.img y update.asc.
၎င်းကိုပိတ်ပြီး microSD ကဒ်အထိုင်ထဲသို့ထည့်ပါ။
တစ်ပြိုင်နက်တည်းတွင် start ခလုတ် (အလယ်စတုရန်းခလုတ်) နှင့် on / off ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဖိထားပါ။ စာဖတ်သူသည်ပါဝါတက်ပြီးစနစ်သစ်ကိုစတင်ထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်။ ယခုသင်သည်ခလုတ်များကိုလွှတ်နိုင်သည်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားသောအခါ၊ "အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးစီးစွာပြီးစီးသွားသည်" ဟူသောသတင်းစကားပေါ်လာမည်။ ထိုအချိန်အထိ microSD ကဒ်ကိုပိတ်ထားရန်သို့မဟုတ်မဖယ်ရှားပါနှင့်။
ဒီပြီးပြီ နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုကိုယ်တိုင်အရမည်သည့်ပြproblemနာကိုမဆိုဖြေရှင်းသင့်သည် သိုမဟုတ်လျှင်သင်၏ပြyouနာကိုနည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုဌာနသို့သွားသင့်ပြီးသင့်ကိုကူညီမည့်သူသို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
သင်သူ့ကိုဆက်သွယ်နိူင်သည် အောက်ပါဝဘ်လိပ်စာရှိ BQ နည်းပညာဝန်ဆောင်မှု.
ဒီသေးငယ်သောအလှူငွေဖြင့်ပစ္စည်းကိရိယာရှိသည့်သင်တို့အားလုံးအားကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည် BQ Cervantes တို့ထိပါ မတူကွဲပြားသည့်ပြ,နာများနှင့်ကြုံတွေ့ရလျှင်သင်ဖြေရှင်းနိုင်ပြီးသင်၏ eReader ကိုအပြည့်အဝနှင့်မည်သည့်ပြwithoutနာမှမပါဘဲခံစားနိုင်သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - စပိန်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော eReaders တွင်နောက်ဆုံးပေါ် BQ Cervantes Touch Light
ရင်းမြစ် - bqreaders.com
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ကုမ္ပဏီများမှ » BQ » BQ Cervantes Touch Light ပိတ်ထားသည်
BQ Cervantes Touch Light ၏ဘက်ထရီသည်မည်မျှကြာကြာ (အသုံးပြုမှုအခြေအနေမှန်တွင်) ကြာရှည်ခံနိုင်မည်နည်း ??? လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကသူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကို Fnac ဗားရှင်းတွင်ပေးခဲ့သည်။ WiFi နှင့်အလင်းရောင်ပြတ်တောက်သွားသော်လည်း ၄ ရက်ထက်နည်းသောအချိန်၌သာ၎င်းကိုမိနစ်အနည်းငယ်မျှအသုံးပြုခြင်းကကျွန်ုပ်အားဘက်ထရီအားနည်းနေသည်ဟုစွပ်စွဲသည်!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုသင်ကူညီနိုင်မလားသိချင်တယ်။ သူတို့ကသုံးပုံတစ်ပုံပါတဲ့ pdf စာအုပ်တွေပေးတယ်။ ပထမကိုပြproblemsနာမရှိဘူး၊ ဒုတိယထဲမှာစာရွက် ၆ လုံးလောက်ရှိရင်အခန်းကိုပြီးအောင်လုပ်တယ်။ ငါစာသားနဲ့တူတဲ့စာလုံးတစ်လုံးကိုဘယ်ဘက်မှာတွေ့ရတယ်။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုငါဘယ်လောက်ပုံစံမျိုးနဲ့ကစားလဲ၊ ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားအခန်းကိုဒီလိုမျိုးမစခင်အထိဘယ်ဘက်မှာအနည်းငယ်သာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့စာမျက်နှာအလွတ်ကိုတွေ့နိုင်တယ်။ စာအုပ်အပြည့်အစုံမှာလိုက်ရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်
လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသောအရာမှာကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူများကိုဖြေရှင်းရန်၊ BQ နှင့်တာဝန်ရှိသူများဘာလုပ်ရမည်ကိုဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့်စတိုးဆိုင်သို့မ ၀ င်ရသနည်း။
Jordi Cabezudo Torralba ဟုသူကပြောသည်
စျေးဝယ်စတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်အဘိဓာန်များကိုကျွန်ုပ်မရရှိနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ချိတ်ဆက်ထားသင့်ကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောပါသည်။ ဝိုင်ဖိုင်မှန်ကန်မှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်အား၎င်းကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေရန်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားတိုင်းနောက်လာမည့်စာမျက်နှာသည်အလွတ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အရာအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးကြိုးစားခဲ့သည် နည်းလမ်းတစ်ခု မင်းငါ့ကိုအဖြေပေးနိုင်မလား?
Jordi Cabezudo Torralba ကိုပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ် CTL ကိုဖွင့်လို့မရပါဘူး သင်ဖွင့်လိုက်သောအခါအစိမ်းရောင်အလင်းသည်ပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာစတင်အရည်ပျော်သွားသည်။ ဒါဟာကောင်းစွာအားသွင်းနေပါတယ်, ငါက usb နှင့်ဘာမျှမနှင့်အတူ PC နှင့်ချိတ်ဆက်ပါပြီ။ reset လုပ်ပြီးပြီ။ ငါတရားဝင်စာမျက်နှာသို့မဟုတ်အခြားသူများအပေါ်ဖြေရှင်းချက်ရှာမတွေ့ပါ။ မည်သူမဆိုအတူတူခံစားရပါသလား
ငါ bq cervantista billet lingt ကိုလွှတ်လိုက်ပြီး၎င်းကိုပိတ်လိုက်သောအခါ၎င်းကိုဖွင့်ရန်သွားသောအခါပိတ်ဆို့လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
Maria jose အားပြန်ကြားပါ
Alejandra, မင်းနဲ့ငါအတူတူပါပဲ ၎င်းသည်သော့ခတ်ထားပြီးအစိမ်းရောင်မီးသည်အလွန်လျှင်မြန်စွာမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်သည်။ ငါတရားဝင်စာမျက်နှာမှတဆင့်အီးမေးလ်များစွာကိုတင်ထားပါပြီ၊ ဒါပေမဲ့သူတို့မဖြေကြဘူး…………ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းလိုပဲငါထားခဲ့တာတွေအားလုံးပြီးပြီ၊
ANTONIO က de huelva
ကျွန်တော့်မှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် tagus ၈ လရှိခဲ့ပြီးမျက်နှာပြင်ကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီးနည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုပြတ်တောက်သွားပြီးမျက်နှာပြင်ကသာပြသည်
မင်္ဂလာပါ၊ စာအုပ်များကို cervantes touch light ထဲ၌ထည့်ရန်ကြိုးစားနေပြီးကွန်ပျူတာကပင်အသိအမှတ်ပြုသည်မဟုတ်ပါ။ ပထမတစ်ခုပြန်ပို့ပြီးသည်နှင့်ဒုတိယဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာတွင်ပြproblemနာမရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်စစ်ဆေးပြီးပြီ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်မည်လား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်လာသောအခါငါ bq ကိုပိတ်လိုက်, ငါကတိုက်ရိုက်ဖွင့်ခြင်းနှင့်ကွန်ပျူတာပြီးသား🙂မေလ 2017 အသိအမှတ်ပြုသည်
ကိုယ့် cervantes ထိအလင်းရောင်ဝယ်လိုက်တယ်
။ ။ ။ ဟုသူကပြောသည်
- ကျွန်ုပ်သည်သက်ဆိုင်ရာဖိုင်ကိုကူးယူပြီးပါပြီ (ဤဖြစ်ရပ်တွင်၊ Fnac Touch Light အတွက်)
microSD format လုပ်ပါ
- ကျွန်ုပ်ဖိုင်ကို unzip လုပ်ပြီး bqupdate ဖိုင်တွဲကို sd ၏ root သို့ကူးယူပါ
- ဤတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းငါ e-reader ကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားပြီး၊ "device on Turn" မျက်နှာပြင်ပေါ်လာသောအခါ၊ ၎င်းသည်ဖွင့်နေကြောင်းညွှန်ပြသည့်အရက်ဆိုင်များ၏ပုံမှန်ကာတွန်းရုပ်ပြကိုမပြပါ၊ ၎င်းသည်အသစ်ပြောင်းနေခြင်းနှင့်မည်သည့်အရာမျှမပြပါ။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုခဏထားခဲ့ရန်ကြိုးစားခဲ့သည် (၃၀ ′သို့သော်၎င်းသည်တစ်ခုခုလုပ်သည်၊ မလုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ ... ) ။ ထိုအခါငါဖွင့်သောအခါ, ကဖွင့်ပေမယ့်အရာအားလုံးအတူတူပင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ငါဒီဖြစ်စဉ်ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ပြီ ဖိုင်ကိုစနစ်တကျဒေါင်းလုပ်မလုပ်နိုင်လျှင်ထပ်မံ download လုပ်ပြီးပြီ။
တစ်ယောက်ယောက်မှာအကြံဥာဏ်ရှိသလားကြည့်ကြရအောင် ... ငါ့ရည်းစားကိုပေးလိုက်တာလား၊ ဒီနေ့ (မနေ့က) ဒီ ebook ပျက်သွားတာ၊ ဘယ်အချိန်မှာမင်းလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေလဲ ... ဘာမှမ (စာကြည့်တိုက်ကိုဝင်ရောက်၊ အလင်းကိုဖွင့်ပါ) နဂိုအတိုင်းရှိနေသည်အထိအလင်းကိုပိတ်ထားပါ၊ ဆက်တင်များစသည်တို့ကိုကြည့်ပါ။
ငါ၌အတိတ်ကာလ၌ fnac ebook ရှိခဲ့သည် (ပထမ ဦး ဆုံးထွက်လာသည်)၊ အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည်ဤကိရိယာများကိုတန်ဖိုးမထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကငါ့ကိုခေါင်းကိုက်ခြင်းများစွာ (အလွန်မတည်မငြိမ် software) ကိုပေး၏။ ဒါဟာ Bq အရာလား၊ fnac firmware လားမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ဘဝကငါ့ကိုမှီခိုနေရင်တောင်မှမအောင်မြင်တာ ၂ ခုရှိသေးတယ်။
ငါစက်ရုံအပြင်အဆင်များကိုပြန်ယူပြီး၊ ကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင်၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်ပုံရသည်။ ယခုအချိန်တွင်၎င်းကိုတစ်ချိန်ကချိတ်ထားခြင်းမရှိသေးသော်လည်း၊ ၎င်းမတိုင်မီကကိရိယာသည်ချိတ်ဆွဲစရာမလိုဘဲသိုလှောင်နိုင်သည့်အများဆုံးအချိန်သည် ၃၀ was ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးပေါ် firmware update နှင့်ပြwithနာဖြစ်နိုင်သည် ...
ကောင်းပြီဘာမျှမ နောက်ဆုံး၊ (များသောအားဖြင့် firmware ဗားရှင်းများထည့်သွင်းခြင်းအပါအ ၀ င်) တိတ်ဆိတ်စွာနေပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာသည်မဖြေရှင်းနိုင်သေးပါ။ Bq သည်ကျွန်ုပ်အတွက် ebook ကိုအစားထိုးသည်။ (ebook အသစ်ကိုကျွန်ုပ်၏အကောင့်သို့ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပို့ဆောင်ခြင်းစသည်ဖြင့်) ။
ဒီစာဖတ်သူကိုအောင်မြင်ခဲ့သူတွေအတွက်ငါဝမ်းသာတယ်၊ ၎င်းသည် ၀ မ်းမြောက်ဖွယ်အလားအလာရှိသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံသည်အလွန်ဆိုးဝါးခဲ့သည်။ အလုံခြုံဆုံးအရာကတော့အဲဒါကိုပြောင်းလဲမယ့်အစားငါ (သူတို့ခွင့်ပြုရင်) ငါပြန်လာပြီး Kindle ကိုဝယ်မယ်။ ငါမှာတစ်ခုရှိပြီးသားဖြစ်ပြီးငါ့ကိုဘယ်တော့မှဒုက္ခရောက်စေဘူး။
ကောင်းပြီ, သူတို့သည်ငါ့ကို BQ ဝန်ဆောင်မှုများကိုအလင်းကိုထိမိပါပြီနှင့်အကယ်။ မျက်နှာပြင်အဘို့မည်သည့် APPLICATION ကိုလျှောက်ထားခြင်း (ချိန်ညှိချက်များ, စာကြည့်တိုက်, ဝိုင်ဖိုင်နှင့်စာအုပ်တစ်အုပ်တွင်ပင်) APPLICATION ဖွင့်သည်အထိပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုရပ်တန့်မထားဘူး, မင်္ဂလာပါ။ ပုံမှန်လား။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကငါ့ကိုတစ်ခုခုပြောပြနိုင်သလား ?? စတိုးဆိုင်ရှိ PQ အိုင်တီ ၀ ယ်ယူရာသူတို့သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောအရာဖြစ်လျှင်မသိ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
မော်ကွန်းတင်ထားသောစာအုပ်ကိုကျွန်ုပ်ဘာကြောင့်ပြန်လည်ထုတ်ယူလို့မရပါဘူး။ ငါစာအုပ်၏အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာပေါ်လာသောသော unarchive ဟူသောစကားလုံးမမြင်ရပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကွန်ပျူတာသည် BQ ထိတွေ့မှုအလင်းကိုမသိရှိပါ။ ၎င်းသည်သင်အသုံးပြုသောကေဘယ်ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် HTC ဖုန်းတစ်ခုမှတစ်ခုကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီး၎င်းကိုအသိအမှတ်ပြုပါသည်။
help my bp ကျွန်ုပ်မျက်နှာပြင်ထိပ်တွင် Nubico အမှတ်တံဆိပ်ရရှိထားသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်မျက်နှာပြင်၏အစိတ်အပိုင်းများဆုံးရှုံးသွားသည့်စာအုပ်များကိုကျွန်ုပ်အားဖတ်ခွင့်မပြုပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်လျှင်၎င်းကိုထုတ်ယူခြင်းနှင့်မတူပါ။
ငါမလိုချင်ဘူး၊ ငါဘာသာစကားကို Basque ဘာသာစကားနဲ့ထားလိုက်ပြီးစပိန်လိုဘယ်လိုရေးရမလဲမသိဘူး
arantxa rus ဟုသူကပြောသည်
အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုတောင်ပိတ်ခွင့်မပြုပါဘူး။ ပြီးတော့dnubico သတင်းကိုလက်ခံခြင်းသည်တရားမျှတခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏စာရင်းပေးသွင်းခြင်းအဆုံးသတ်သွားကြောင်းသူတို့ကအသိပေးသည်။ ငါ Nubico ကိုရေးနေတယ်၊ ​​ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကငါ့စာအုပ်ကိုပိတ်ထားပြီလို့ထင်တယ်။ သူတို့မကြာမီတုံ့ပြန်လျှင်ကြည့်ပါ။
arantxa rus အားပြန်ကြားပါ
ငါ "device information" ကိုရှာပြီး "factory settings" restore လုပ်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။ သင်၏ ebook တွင်မည်သို့နေရာချထားမည်ကိုရှာဖွေရန်အတွက်ဂူဂဲလ်ဘာသာပြန်သူကိုသုံးပါ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ။
မိုင်းတွေသေကုန်ပြီ ... အချိန်အတော်ကြာပြproblemsနာတွေဖြစ်ခဲ့တာ ... ဘာမှမလုပ်ဘူး ... programol obsolecensia ... :(
obsolescence ... hehehehehe ... အများကြီးဖတ်ပါ
Amparo LLorens Aroca ဟုသူကပြောသည်
ငါ (မလိုချင်သော) bq Cervantes ကိုဝယ်လိုက်သည်။ သို့သော် Nubico ၌ကျွန်ုပ်ဖတ်ရန်စာအုပ် ၂၀၀၀ ရှိခဲ့သည်။ ကောင်းသည်၊ သို့သော်သင်သိသည် (မည်မျှကောင်းသည်ကို) သူတို့အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့သည်။ မင်းစာအုပ်တွေဖတ်ဖို့ ၉ လယူရတယ်၊ ဒါနဲ့ငါစတိုးဆိုင်ထဲကတစ်ယောက်တည်းကျန်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုထောင်ချောက်ရောက်လာပြီ၊ သူမလိုချင်တဲ့အချိန်စတိုးဆိုင်ကို ၀ င်လာတယ်၊ ပြီးတော့သူတို့ကနောက်ဆုံးစာအုပ် ၁၆ ခုကိုပေးတယ်၊ ငါကအခြားအကြောင်းတစ်ခုလိုချင်တယ်၊ ပြီးတော့သူတို့ကဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မှန်ဟုတ်မဟုတ် ဟူ၍ ငါပြောမည်အကြောင်း၊
ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းသည်ပျော်ရွှင်သော Nubico မပါဘဲမလုပ်နိူင်ပါလား။ မဖျက်နိုင်မလား? စာအုပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ကြည့်ပါ။ ဤ Nubico လှည့်စားမှုကို install လုပ်ထားပြီးသော ebook အတွက်တရားဝင်သည်
Amparo LLorens Aroca အားပြန်ပြောပါ
၀ မ်းနည်းစရာကောင်းသည်မှာ bq အိမ်သည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များမရောင်းချမီဖြေရှင်းသင့်သောချို့ယွင်းချက်များကိုပြုပြင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အယူမှားသူများသည်ငွေကြေးကိုပိုက်ဆံဖြုန်းပြီးနောက်မှကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုအရှိန်မြှင့ ်၍ ဖတ်ရန်မတတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါဟာငါ bq ထံမှဝယ်နောက်ဆုံးသောအရာဖြစ်လိမ့်မည်။
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ on / off ခလုတ်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားသည့်အခါမနေ့ကအထိကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
သင့်မှာနည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များရှိတယ်။
Iosu ငါ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာပြင်သည်သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသောအခြေအနေများတွင်ပြိုကွဲသွားပြီးသင်၏အားလပ်ရက်အပိုပစ္စည်းများ၏ကိုးကားချက်များကိုလွတ်လပ်သောနည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုသို့ယူဆောင်လာရန်သင့်အားကျွန်ုပ်စာရေးနေပါသည်။
BQ ကကျွန်ုပ်သည်ထိုသတင်းအချက်အလက်များကိုမပေးကြောင်း၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်ယင်းကိုပြုပြင်လိုပါက ၄ င်းတို့၏နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု (ယူရို ၁၀၀) သို့ယူသွားပါဟုပြောခဲ့သည်။
ငါအဲဒါကိုပြင်တော့မယ်မဟုတ်ပေမယ့်ငါ့ရဲ့ဆောင်းပါးတွေထဲကတစ်ခုခုအတွက်ငါဘ ၀ ကိုပိတ်ပင်ထားတယ်။
Iosu I. သို့ပြန်သွားရန်
မင်္ဂလာပါမနေ့ကကျွန်ုပ်၏ bq cervantes မှ fnac မှအလင်းကိုကျွန်ုပ်ထိလိုက်သည်။ ၎င်းကို Wi-Fi မှတဆင့်အဆင့်မြှင့်လိုက်သည်။ ၎င်းသည်ပြန်လည်စတင်ခြင်းပြီးဆုံးချိန်တွင်၎င်းမှ“ device ကိုဖွင့်ခြင်း” ဟူသောသတင်းနှင့်အတူဆက်လက်ရှိနေပြီးတိုးတက်မှုမရှိပါ။ ၎င်းသည်မဖွင့်၊ မပိတ်နိုင်ပါ။ ငါကပြန်လည်စတင်, ပိတ်ထားခြင်းနှင့်ဖွင့်သည်, ဘက်ထရီစီးဆင်းခွင့်နှင့်ကအားသွင်းခြင်းနှင့်ဘာမျှမ ... တူညီနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ?
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် BQ Cervantes Touch Light ကိုရှာဖွေနေသည်။ မျက်နှာပြင်ပျက်နေပြီးသင်ရောင်းလိုသည်။ ကျွန်ုပ်အမှု၌ကျွန်ုပ်၏ရှေ့မှောက်၌ပြတ်တောက်ခဲ့ပြီး BQ I ၌ဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးဖြစ်လို အပိုပစ္စည်းမရောင်းနဲ့
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Touch Light ဖြင့်စတင်သောအခါတူညီသော crash ပြhavingနာရှိနေပါသည်။ ငါခြေလှမ်းများနောက်သို့နှင့် 6.0.3GB SD က HC အပေါ် firmware ကို 16 ထားပါပြီ။ ငါမှတ်ချက်များအတွက်ညွှန်ပြဖိုင်များကိုထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
ပြနာကခလုတ်နှိပ်သည့်အချိန်တွင် SD ကဒ်ဖတ်နေသည့်အမှားတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းပြသနေပြီး၎င်းမှထိုအရာမှဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းကို PC မှ ExtFAT အဖြစ် format လုပ်သည်။ ကဒ်ကိုဘာကြောင့်မဖတ်ရသလဲ။
မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်းကျွန်ုပ်၏ Fnac Touch plus နှင့်အတူ "Massive Internal Storage ... " ဟူသောသတင်းကိုသုံးရက်ကြာပိတ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုကွန်ပြူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးကျွန်ုပ်၏စာအုပ်များကိုကြည့်ရှုနိုင်သော်လည်း၊ ဖိုရမ်များနှင့်ယူကျုးဘ်များတွင်ကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုခဲ့သည့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောနည်းလမ်းများဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်အားပိတ်ထားမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်အလွန်အပူတပြင်းရှိပါသည်။ ဘက်ထရီကပြည့်နေပြီးသင့်ရဲ့တုန့်ပြန်မှုကိုမြင်ရဖို့အတွက်အချိန်အကြာကြီးယူဖို့သေချာပါတယ်။ အကြံဥာဏ်များရှိပါသလား။
ငါ့ ebook ထဲမှာစာမျက်နှာလှည့်။ Fnac ထိတွေ့မှုအလင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးအစိမ်းရောင်နှင့်စတင်ခဲ့သည်။ နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုကကျွန်ုပ်အားပေးသောအဖြေတစ်ခုမှာ ebook ကိုနှစ်နာရီအားသွင်းပြီးနောက်တစ်မိနစ် power button ကိုနှိပ်ပါ။ ငါထင်သကဲ့သို့, ကအလုပ်မလုပ်ဘူး ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုမပေးသောနည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုကပေးသောဖြေရှင်းနည်းများစွာအနက်နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုငါစာအုပ်မပါဘဲ, ငါသို့မဟုတ်သော့ဖွင့်နိုင်ခြင်းရှိမရှိကြည့်ရှုရန်ဘက်ထရီအားကုန်ပြီသည်အထိရက်ပေါင်း 15 သို့မဟုတ်0ရက်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုဤပြproblemနာမရှိသော၊ ချက်ချင်း ၀ ယ်ယူရန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်သတ်မှတ်ထားသောစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုကျွန်ုပ်ကိုအကြံပေးနိုင်ပါသလား။
BQ Cervantes ဝေဒနာသည်အားလုံးအားနှုတ်ခွန်းဆက်သပါသည်
ကျွန်ုပ်သည် bq cervantes ebook ကို ၂ လကြာအောင်ထားခဲ့ပြီး ၂ ရက်အတွင်းကျွန်ုပ်၏ဘက်ထရီသည်ယိုစီးသွားသည်။ ကျွန်ုပ်၏မိသားစုရှိအခြား ebook များတွင်ဘက်ထရီများသည် ၂ လအထိကြာနိုင်သည်။
ငါနှစ်လအတွက် bq cervantes ebook ရှိခဲ့ပြီ, ငါ့ဘက်ထရီနှစ်ရက်အတွက်ယိုစီးမှု, ဒီထုတ်ကုန်အတွက်ပုံမှန်ပါပဲ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ့မိသားစုအခြား ebooks အတွက်ဘက်ထရီနှစ်လအထိကြာရှည်။
Carlos del Castillo ဟုသူကပြောသည်
BQ Cervantes မျက်နှာပြင်ပြproblemsနာများ။ ကျွန်ုပ်၏ BQ Cervantes4သည်တစ်လမပြည့်မီ ... မျက်နှာပြင်တွင်လိုင်းများနှင့်အစက်အပြောက်များပါ ၀ င်ပြီး BQ သည်ကျွန်ုပ်အားပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ယူရို ၁၀၀ ကိုအာမခံထားပြီးကျော်လွှားရန်ရည်ရွယ်သည်။ ထို့အပြင် e-reader သည်အလွန်အားနည်းနေပုံရသည်။ သူဟာမကြာခဏချိတ်ဆွဲတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်ယူပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းကိုပင်ပြောဆိုခြင်းမပြုပါ။ ဂလာတိဘယ်တော့မှပြောလိမ့်မယ်အဖြစ်!
Carlos del Castillo ကိုပြန်သွားပါ
ပေါ်လာသော link သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် support / downloads section ရှိ bq ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပြီးနောက်ဆုံးပေါ် update ကို download လုပ်ပါပြီ။ မဟုတ်ပါကသင်ညွှန်ပြသည့်အတိုင်းအဆင့်များအတိုင်းလုပ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၆.၀.၃ ဟုပြောသော update ကို download လုပ်ပါ။ ငါမျက်နှာပြင်ကိုထိတဲ့အခါမှာငါ့ကိုတုံ့ပြန်မထားဘူး။ ငါစစ်ဆေးပြီးသို့မဟုတ်အခြားပြproblemနာရှိမရှိငါမသိ။ ကူညီကြပါ
ကျွန်ုပ်စတိုးဆိုင်နှင့် interner ကိုဆက်သွယ်မရပါ
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါကျွန်ုပ်သည်စျေးဆိုင်သိုမဟုတ်အဘိဓာန်များကိုမကြည့်ရှုနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ချိတ်ဆက်ထားရမည်ဟုကျွန်ုပ်အားပြောသည်။ ဝိုင်ဖိုင်မှန်ကန်သည်။ ကျွန်ုပ်အား၎င်းကိုသက်ဝင်စေရန်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားတိုင်းနောက်လာမည့်စာမျက်နှာသည်အလွတ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အားလုံးကြိုးစားခဲ့သည် လမ်းလည်းမရှိ။ မင်းငါ့ကိုအဖြေပေးနိုင်မလား?